कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो « प्रशासन
कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो
प्रकाशित मिति : 27 May, 2020 10:05 am
काठमाडौं । चीनको उहानबाट शुरु भएको ठानिएको प्राणघातक कोरोनाभाइरसको महामारीबाट संयुक्तराज्य अमेरिकामा एक लाख बढी मानिसको मृत्यु भएको छ ।
वल्र्डओमिटर्सका अनुसार नेपाली समयानुसार बुधबार बिहान यो संख्या पुगेको हो । विश्वभर यतिठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको अमेरिका पहिलो देश हो ।
विरोधाभाष त के भने, अमेरिकामा पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भइरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस ‘चिनियाँ भाइरस’ले अमेरिकीलाई खासै असर नगर्ने बताइरहनु भएको थियो । अझ उहानलाई लकडाउनमा राखेर त्यहाँका जनताको मानव अधिकार हनन भएको उहाँको आरोप थियो ।
अमेरिकी जनजीवनलाई नराम्रोसँग गाँजेको अमेरिकामा १७ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित छन् । स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएकाले अझै पनि दिनहुँ ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएका छन् । तर स्वास्थ्य ठूलो कि अर्थतन्त्र ? यी दुई बहसमा अल्झिएका राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि मानिसको स्वास्थ्यलाई महत्व नदिएको र अर्थतन्त्रप्रति मात्र ध्यान दिइरहेको आलोचना खेप्न बाध्य हुनु भएको छ । उनी औलोको औषधि हाइड्रोक्लोरोक्वीनको सेवन गरेमा कोरोना ठीक हुन्छ भन्ने विवादास्पद भनाईमा अडिग छन्, जबकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र वैज्ञानिकहरुले यही औषधिको जथाभावी सेवनका कारण पनि धेरै अमेरिकीको ज्यान गएको बताइरहेका छन् । डब्लुएचओले त यो औषधिलाई कोरोना रोगका सन्दर्भमा अनुसन्धान परीक्षण गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ ।
मास्क समेत लगाउन हिच्किचाउने हठी स्वभावका राष्ट्रपति ट्रम्पको ध्यान विश्वकै पहिलो अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कहिले खुला गर्ने भन्नेमै छ । उनी दिनहुँ भन्छन्– अमेरिका बन्द गर्नका लागि होइन, यो खुला छ खुला हुनु पर्छ । एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले राम्रोसँग नेतृत्व गरेकै कारण मृत्युसंख्यामा कमी आएको बताएका छन् । तर कुनै पनि महामारी वा युद्धका कारण यतिठूलो संख्याका अमेरिकीको मृत्यु भएको पहिलो पटक हो ।
यही रस्साकस्सी र आरोप–प्रत्यारोपबीच विश्वभर ३ लाख ५२ हजारको मृत्यु भइसकेको छ भने ५७ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित छन् । अझै पनि ५० हजारभन्दा बढी मानिस गम्भीर अवस्थामा छन् । युरोपेली क्षेत्रका मुलुकमै एक लाख ६९ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । भाइरस प्रसारका नयाँनयाँ हटस्पटहरु जस्तै ब्राजिल, भारतमा संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्नेछ । अहिले विश्वभर खोप कि उपचार पहिले भन्ने दौड जारी छ, तर कसैले पनि कोरोनाभाइरसको सार्थक उपचार फेला पार्न नसकेको अवस्थामा लकडाउन वा सामाजिक दूरी, परीक्षणहरुको दायरा बढाउने नै अहिलेसम्मका सर्वोत्तम विधि देखिएका छन् । तर यी विकल्पकै बीच समग्र विश्व ‘कोरोनाकाल अघि”को झैं सहज कहिले होला ? विश्वका धनी वा गरिब दुबै किसिमका मुलुकका नागरिक र सरकारहरुको ध्यान यसमै छ ।
Tags : अमेरिका कोरोना
20 April, 2021 8:28 pm
सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा प्राध्यापक यज्ञराज पाठक नियुक्त
काठमाडौँ । सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा प्राध्यापक यज्ञराज पाठक नियुक्त
20 April, 2021 8:19 pm
कोरोना सङ्क्रमित पूर्वराजा दम्पती निर्मल निवासको सेल्फ आइसोलेसनमा
काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमण देखिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र रानी
20 April, 2021 8:03 pm
सहलेखापालको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा स्थगित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले सह लेखापाल पदको
20 April, 2021 8:00 pm
कन्सुलर विभागले एक पटकमा २५ जनालाई मात्र सेवा दिने
काठमाडौँ । कन्सुलर विभागले एक पटकमा २५ जनाका दरले सेवाग्राहीलाई